शरिरका यी अंग पुरुषहरुको नजरमा परोस् भन्ने चाहन्छन् युवतीहरू – Jagaran Nepal
प्रकृतिले महिला र पुरुषको शरीरमा जन्मदै भिन्नता दिएको हुन्छ । यसलाई चाहेर पनि मानिसले परिवर्तन गर्न सक्दैन । हुन त विज्ञानले केही चमत्कार गरेको छ । त्यसले प्रकृतिक धेरै चुनौती दिन सकेको छैन । विशेष गरेर महिलाहरूका अंग पुरुषका भन्दा आकर्षक हुन्छन् ।
बेलायतबाट प्रकाशित हुने एक न्यूज पोर्टलका अनुसार महिलाको छाती, कम्मर र उसको पछाडिको भाग (कम्मरभन्दा मुनि) लाई धेरैले नजर लगाउने गरेको पाइन्छ ।महिलाहरूले पनि आफूलाई सुन्दर देखाउन ती भागहरूलाई जोडतोडले मिहेनत गरेर सुन्दर राख्छन् । पुरुषहरूका नजर पनि त्यतै जाने गरेका हुन्छन् ।.
हाम्रो नेपाली समाज होस् वा पश्चिमा या भारतीयहरू नै किन नहुन महिलाहरू आफ्नो छातीलाई आकर्षक देखाउन ज्यान छाडेको प्रष्टै देख्न पाइन्छ छाती मात्रै होइन कम्मर र पछाडिको भाग पनि महिलाहरूले सकेसम्म पुरुषले हेरिदेओस् भन्ने चाहना राख्ने गरेको समचारमा उल्लेख छ ।
यो पनि :पुरुषले महिलाको कुन–कुन अङ्गको ख्याल गर्छन् ?पुरुषले पहिलो पटक महिलालाई हेर्दा कस्तो कुरामा विशेष ध्यान दिन्छन् त ? यो कुरा धेरै महिलाहरुको लागि चासोको विषय बनेको हुन सक्छ । जब कुनैपनि युवकको अपरिचित युवतीसँग आँखा जुध्छ । युवकले त्यसपछि नजरले भ्याउन्जेल एकसरो युवतीको सिरदेखि पुच्छार सम्म हेर्छ ।
पहिलो नजरमा जिउका सबै भागमा आँखा पुराउन सक्ने कुरा भएन । आखिर पुरुषले पहिलो नजरमा महिलाका कुन कुन भाग वा विषयमा ध्यान दिन्छ होला ? मनोविज्ञहरुका अनुसार पुरुषले सुरुमै महिलाका यी ५ कुरामा ख्याल राखेको हुन्छ ?
पुरुषले महिलाको सरीरमा सुरुमै ख्याल राख्ने एउटा अंग हो कपाल । यसको मतलव पुरुषले निकै लामो कपाल मात्र मन पराउँछ भन्ने होइन । तर सफा, स्वस्थ तथा आकर्षक कपाल भएकी महिलाले पुरुषलाई आकर्षित गर्न सक्छिन् । भनिन्छ युवतीसँग आँखा जुधाइरहँदा युवकले ती युवतीको कपाल सुम्सुम्याइरहेको कल्पना गरिरहेको हुन्छ ।
के तपाइँको मुस्कान आँखासम्मै पुग्यो ? अर्थात् तपाइँले मुखको मुस्कान सँगै आँखाबाट पनि सोही भाव व्यक्त गर्न सक्नुभयो ? मनोविज्ञहरुका अनुसार पुरुषहरु महिलाको मुस्कान बनावटी हो की साँच्चिकै हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्छन् । महिलाको ओठ तथा आँखाको भावको अध्ययन गर्न पुरुषहरु सक्षम हुन्छन् भनिन्छ ।
पुरुषहरु अलि सुरिलो बोली भएका महिलाहरुप्रति आकर्षित हुन्छन् । बोलिको पिच कम भएका वा धोद्रो आवाज भएका महिलाले पुरुषलाई आकषिर्त गर्न सक्दिनन् । मनोविज्ञहरुका अनुसार सुरिलो बोली भएका महिलाहरु बढी स्वस्थ हुने विश्वास पुरुषमा हुन्छ ।
कम्मर र हीपको आकारः
पुरुषले महिलाको कम्मर र हिपको आकारमा विशेष ध्यान दिन्छन् । छिनेको कम्मर र चौडा हीप भएकी महिला पुरुषको रोजाइमा पर्छिन् भनिन्छ । यसले महिलाको प्रजनन क्षमता उच्च भएको संकेत समेत गर्छ ।
आँखाः वास्तवमा आँखा पहिलो नजर पर्ने अंग नै हो । आँखाको आकार, नशालु पन, नानीको रङ, परेलाको बनावट लगायतका सबै कुराले महिलाको आकर्षणमा प्रभाव पार्छ र यो कुरामा पुरुषले विशेष ध्यान दिन्छन् । एजेन्सी